के महिला पात्र साँच्चिकै निम्छरो हुन ?::Online News Portal from State No. 4
मरुन कलरको सारीमा भित्रबाट एकजना सुन्दर महिला बाहिर आउँछिन् । सायद, उनी कतै बाहिर जान लागेकी हुन् । सम्वादसँगै ती महिलाको नमिलेको सारीको मुजा उनका पतिले मिलाई दिन्छन् । महिलाले पनि पतिलाई कुनै कुराको सूचना, जानकारी शिक्षा दिइरहेकी हुन्छिन् । यो दृष्य नेपाली टेलिभिजनमा आउने नेपाली बिज्ञापन हो । बर्षौँदेखि हामीले हेरेका नेपाली या हिन्दी सिनेमा, सिरियल र बिज्ञापनमा पुरुषको सेवा गरेको मात्रै पाउथ्यौँ । महिलाले पुरुषलाई अफिस जानका लागि कोट लगाइदिने, रुमाल, जुत्ता, ब्याग, गाडी या मोटरसाइकलको चाबी दिँदै गरेको देखिन्थ्यो । यो पहिलो पटक प्रसारण भएको यस्तो बिज्ञापन हो, जस्मा पुरुषले महिलाको सारी सहजै मिलाई रहेको र महिलाबाटै कुनै कुराको जानकारी शिक्षा लिइरहेको देखाईएको छ । हाम्रो सत्ता, सरकार पार्टी, प्रशासन जतासुकै पनि मंचमा बस्ने भाषण र प्रवचन दिने पनि पुरुषहरुले नै हुन्छन् । यस्ता बिज्ञापनहरु हजारौँ छन् । जसमा पुरुषले महिलालाई शिक्षा, सूचना वा जानकारी दिएको । तर, यो पहिलो बिज्ञापन हो, महिलाले पतिलाई सुचना वा जानकारी गराएको ।
यो एनआइसी एसिया बैंकको बिज्ञापन हो । एनआइसी एसियाले आफ्नो बार्षिक उत्सवको अवसर पारेर ल्याएको चामत्कारिक योजनाको बारेमा जानकारी गराउन गरिएको बिज्ञापन हो । यो बिज्ञापनले समाजले महिलालाई गर्ने ब्यवहार प्रतिको दृष्टिकोण नै बद्लिदिएको छ । महिला र पुरुषको समान हैसियत, समान अस्तित्व देखाइएको छ । हामीहरुले अहिलेसम्म महिलालाई गुडियाको रुपमा चित्रित गरिएको, मनोरन्जनको साधन बनाएको, अपमानित गरिएका सिनेमा सिरियल र बिज्ञापन हेरिरहेका छौँ । हाम्रो मानसिकता पनि त्यस्तै खालको भएको छ । बिकसित देशहरु युरोेप अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतमा पुरुषहरुले महिलाप्रति गरेको सम्मान देख्दा, सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ । अफिस जाँदा होस या अफिसबाट आउँदा पुरुषले महिलाको कोट फुकाली दिएको, खाना बनाईरहेको, बालबच्चा हेरिहेको, घरायसी र बाहिरी काममा साझेदारी भएको अवस्था देखिन्छ । बिशेष गरी दक्षिण एशियाली मुलुकमा कामकाजी महिलाहरु दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि महिलाहरु आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा आउने क्रम बढ्दै गएको छ । घर बाहिरको काममा पनि महिलाहरुको संलग्नता बढ्दै गइरहेको छ । घर बाहिरको पनि काम गर्ने कामकाजी महिला एक्लैले घर भित्रको पनि काम गर्नुपरेको अवस्था छ । हाम्रो सामाजको चेतनास्तर, संस्कार, पारिवारिक पृष्ठभूमि र पितृसत्तात्मक सोचका कारण पुरुषहरुले घर भित्रको काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यस्तो सोचले जरा गाडेको हाम्रो समाजमा, महिलाको ब्यक्तिगत काममा समेत मद्दत गरेको कुरा बिज्ञापनमार्फत देखाइएको छ । यसरी सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारण गर्नुलाई समाजको सोच बदल्ने संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा कामका लागि पुरुषहरु बिदेशिने परम्परा बसेको पनि धेरै भयो । ब्रिटिस र इन्डियन आर्मीका रुपमा काम गरेर स्वदेश फर्कदा केही पुरुषले बिदेशको संस्कार पनि नभित्र्याएको होइन । ब्रिटिस र इन्डियन आर्मीको घरपरिवारमा पुरुषले पनि घर भित्रका काम गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी जनजाति समुदायमा घर भित्रको काम पुरुषहरुले महिलाको भाग भनेर छुट्टाएको पाइँदैन । अहिले युवाहरु पढ्न या रोजगारीका लागि बिदेश जाने क्रम बढेको छ । बिदेश गएसँगै उनीहरुले त्यहाँको संस्कार पनि भित्र्याएको पाइन्छ । खासगरी बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि यो महिलाको यो पुरुषको काम हो भनेर बिभाजन गरेको देखिदैन । परम्परावादी, पुरातनबादी सोच राख्ने परिवारभित्र भने यो तोड्न धेरै गाह्रो छ । यस्तो सोचाइलाई आमसंचारमाध्यमले पनि मलजल गरिरहेको छ ।
आमसंचारमाध्यबाट आउने हिन्दी तथा नेपाली टिभी सिरियलमा महिलाको स्थान र हैसियतलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । बिशेष गरी महिलालाई मनोरन्जन र उपभोग्य बस्तुको रुपमा चित्रित गराइन्छ । सिरियल, सिनेमा र बिज्ञापनहरुमा पनि महिलालाई घरभित्रको काममा सीमित गराइएको, पतिब्रता नारी र केही गर्न नसक्ने निकम्मा, अर्काको भर पर्ने खालको महिलाको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । आमसंचारमाध्यममा आउने नकारात्मक सिरियल तथा बिज्ञापनले, दर्शकमा पनि नकारात्क सोच जन्माउँछ । केही गीत संगीतले महिलाको भूमिकालाई मानोरन्जन दिने साधनको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । त्यहिँ गीत संगीत, सिरियल सिनेमा र बिज्ञापनबाट दर्शकहरुले सिको सिक्ने गरेका हुन्छन् । दर्शकहरुले सिनेमा सिरियल र बिज्ञापनमा देखाइएको जस्तै फेसन, ब्यवहार, गतिबिधि सिको गरिरहेका हुन्छन् । जुनसुकै समुहका नेपाली दर्शकहरुले धेरै यस्तो हिन्दी सिनेमा र सिरियलहरु हेर्ने गर्दछन् । ती सिनेमा र सिरियलमा महिलालाई जिस्काएको, यौन शोषण गरेको, बलात्कार गरेको जस्ता घटनालाई प्रधानता दिइएको हुन्छ । महिलालाई निरीह पात्रको रुपमा चित्रित गरिन्छ । के महिला पात्र साँच्चि कै निम्छरो हुन् त ? यस्ता दृष्यले एकातिर महिला कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ पुरुषले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको बिकास भएको पाइन्छ । अपराधसँंग सम्बन्धित सिनेमा, सिरियलहरुले महिलालाई मनोबैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाएको छ । बालबालिकाहरुले हेर्दा बाल मनोबिज्ञानमा कस्तो असर पर्छ भनेर ख्याल गरिन्न ।
बास्तवमा सिनेमा र सिरियलका कथाकार तथा प्रचार सामाग्री उत्पादन गर्ने निर्माताले, दर्शकले कस्तो चाहन्छन् भन्ने बारेमा कहिले सोचेका छन् ? त्यहि पुरानो शैलीमा बनेका छन् अधिकांश सिनेमा, सिरियल र प्रचार सामाग्रीहरु जसले महिलाको मानसिकता कमजोर बनाउने र समाजमा नकारात्मक सोच फैलाउँछ । हिंसात्मक, भावना पैदा गर्ने गर्दछ । सिनेमा, सिरियल, प्रचार सामाग्री लगायतले क्षणिक रुपमा मानोरन्जन त दिन्छ होला तर अन्ततोगत्वा यस्ले समाजलाई बिकृति अनैतिकता बनाउँछ । पुरानो शैली, सोच बदल्न र महिलालाई स–सम्मान प्रस्तुत गर्न यस्ता खालका बिज्ञापनहरु सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन् ।दुर्गा भण्डारी
बास्तवमा सिनेमा र सिरियलका कथाकार तथा प्रचार सामाग्री उत्पादन गर्ने निर्माताले, दर्शकले कस्तो चाहन्छन् भन्ने बारेमा कहिले सोचेका छन् ? त्यहि पुरानो शैलीमा बनेका छन् अधिकांश सिनेमा, सिरियल र प्रचार सामाग्रीहरु जसले महिलाको मानसिकता कमजोर बनाउने र समाजमा नकारात्मक सोच फैलाउँछ । हिंसात्मक, भावना पैदा गर्ने गर्दछ । सिनेमा, सिरियल, प्रचार सामाग्री लगायतले क्षणिक रुपमा मानोरन्जन त दिन्छ होला तर अन्ततोगत्वा यस्ले समाजलाई बिकृति अनैतिकता बनाउँछ । पुरानो शैली, सोच बदल्न र महिलालाई स–सम्मान प्रस्तुत गर्न यस्ता खालका बिज्ञापनहरु सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन् ।